Izindatshana zika-Ashley Marsh Martech Zone |
Imibhalo nge U-Ashley Marsh
U-Ashley Marsh ungumbhali Wokuqukethwe Okuphezulu ku Okuningi ngo-Maan Softwares Inc. Ube nale nkampani iminyaka emine edlule. Uchwepheshe kuhlobo lokubhala lobuchwepheshe ikakhulukazi ekuthuthukisweni kwamaselula, ukwakhiwa kwewebhu, nakubuchwepheshe bamuva. Ngokusho kwakhe, ubelokhu evezwa kakhulu kuyena njengoba usuku nosuku ubuchwepheshe buyazivuselela buholele emibonweni emisha emenza abe muhle nsuku zonke.
Ukuvuselelwa Kwewebhusayithi: Inqubo Yokukhiqiza Ukuguqulwa Kwewebhusayithi Engaphezulu
Ngabe uqale ibhizinisi futhi uphupha ngokulichuma ngejubane lokukhanya? Yize, ukuba nombono othembisayo nomkhiqizo osezingeni eliphakeme akwanele ukuthi amakhasimende angenelele. Uma umkhiqizo wakho ufinyelela kwabambalwa futhi uthembele ezwini lomlomo ngempumelelo yakho, lokho kungathatha iminyaka eyishumi ukuthi ube nekusasa eliqhakazile . Iwebhusayithi Yokukhuthaza Ukuthengiswa Kwebhizinisi Lakho Kuleli zwe lobuchwepheshe, ukufinyelela
Ungayisebenzisa Kanjani i-Prestashop ye-SEO ekhuphukile nokuguqulwa
NgoLwesithathu, Juni 6, 2018 NgoLwesine, Juni 7, 2018 U-Ashley Marsh
Ukuqhuba ibhizinisi ngokusebenzisa isitolo esiku-inthanethi kuyinto ejwayelekile kulezi zinsuku ngezitolo ezingenakubalwa eziku-inthanethi ezigcwala i-Intanethi. I-Prestashop ubuchwepheshe obujwayelekile ngemuva kwamawebhusayithi amaningi anjalo. I-Prestashop iyisoftware yomthombo ovulekile ye-e-commerce. Cishe ama-250,000 (cishe u-0.5%) amawebhusayithi emhlabeni wonke asebenzisa i-Prestashop. Ukuba ubuchwepheshe obudumile, i-Prestashop inikeza izindlela eziningana lapho isayithi elakhiwe kusetshenziswa i-Prestashop lingenziwa khona ukuze likleliswe phezulu kusesho lwe-organic (SEO) futhi lithole ukuguqulwa okuningi. Injongo